महिला गर्भवती हुन कति शुक्रकिट चाहिन्छ ? « The News Nepal
महिला गर्भवती हुन कति शुक्रकिट चाहिन्छ ?
शुक्रकिट भनेको पुरुष कोष हो, जुन महिलाको डिम्बसँग निषेचित भएपछि भ्रूण बन्दछ ।
किशोर अवस्था पुगेपछि पुरुषको अण्डकोषमा शुक्रकिटको उत्पादन सुरू हुन्छ । शुक्रकिटलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन । सामान्यतया एक पटकमा २ देखि ५ मि.लि वीर्य स्खलन हुन्छ । प्रति मि.लि वीर्यमा करीब ४० देखि १०० करोड शुक्रकिट हुन्छन् । यौन सम्पर्कको क्रियामा वीर्य स्खलन हुँदा करोडौं शुक्रकिटसँगै निस्किए पनि एउटा मात्र शुक्रकिटको महिलाको पाठेघरमा रहेको डिम्बसँग मिलन हुन्छ र त्यसैबाट गर्भ रहने हुन्छ । गर्भ रहनका लागि १.५ देखि ५ मि.लि वीर्य हुनुपर्दछ । यदि ५ मि.लि भन्दा बढी भयो भने वीर्यको मात्रामा शुक्रकिटको घनत्व कम हुने हुँदा गर्भधारणको सम्भावना कम हुन्छ ।
गर्भधारणका लागि एक मि.लि वीर्यमा कम्तीमा २ करोड शुक्रकिट हुनुपर्दछ र ती मध्ये आधा जस्तो चलायमान हुनुपर्दछ । करीब तीस प्रतिशत शुक्रकिटहरू सग्ला र स्वस्थ हुनपर्दछ । किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दा किशोरहरूका यौनाङ्गहरू खास गरी अण्डकोष, वीर्य थैली र प्रोस्टेट ग्रन्थिको विकास हुन थाल्छ । यौनाङ्गहरूको विकाससँगै वीर्यको उत्पादन पनि हुन थाल्छ ।
अण्डकोषले शुक्रकिट उत्पादन गर्छ भने विशेषत वीर्य थैली र प्रोष्टेड ग्रन्थिहरूले एक प्रकारको सेतो पदार्थ उत्पादन गर्छन् । उक्त सेतो पदार्थमा शरीरमै उत्पन्न हुने विभिन्न रसायनहरूको मिश्रण हुन्छ, जसले शुक्रकीटलाई पोषण गरिरहेको हुन्छ । वीर्य भन्नाले शुक्रकीटसहितको सम्पूर्ण सेतो पदार्थ भन्ने बुझिन्छ ।